Eto ianao: Home / triatra / FRAPS for Windows Latest Version vaky
FRAPS for Windows Latest Version vaky
Moa ve ianao te-hampiseho eny ny matihanina Na mety tsy mahazatra hetsika, raha milalao ny toerana tena lalao, DotA 2 na Sports lalao? Eny? tsara, thanks to the computer platform providing software like FRAPS, natao mba hanoratra gameplay. Matetika ianao no efa heverina ho ny toerana tena manova ny toe-voasambotra sy rakitsary nizara. tsara, that is what FRAPS does. Manampy anao mitifitra ny lalao rakitsary mba hahafahanao maneho azy ireo namanao. FRAPS Crack is a universal Windows application that can be used with games using DirectX or OpenGL graphic technology. Fraps nanao izany rehetra izany noho ny fandraisany lamba mora tifitra sy ny fanaovana lahatsary tsary rehefa milalao ny lalao.
To hampiasa FRAPS, avo roa heny Tsindrio eo amin'ny FRAPS kisary ary manomboka ny fampiharana eo anoloan'ny lalao. Rehefa manomboka ny lalao, ianao Hanangana toetsika hanoherana ny tahan'ny eo amin'ny zorony 'ny efijery. Na izany aza, ny isa azo nafindra toerana akory na zorony raha manahirana anao. Naka sary sy ny lahatsary dia amin'ny alalan'ny mampandeha hotkeys.
Mety efa nahita ny mavo isa ao an-jorony mihazakazaka ianao isaky ny lalao, ary eny izay FRAPS. Noho izany, niova ny isa dia ny takela izay mampiseho aminao izay FPS (toetsika isan-tsegondra) ianao mahazo na inona na inona omena lalao na ny zana-kazo fa ny solosaina dia afaka mamokatra eo amin'ny efijery isan-tsegondra.
Mbola misy lalao izay mihazakazaka eo amin'ny 30FPS amin'ny hampionona. 30Mety ho toa tsy FPS, Nampahery fa afaka manome ny tena tapaka FPS izany, fa tsy mitady izay ho ratsy araka ny mety mieritreritra. Ary, 60FPS no gamer ny PC dia mikendry ny tsy tapaka, satria mahatonga ny immaculate 60FPS lalao traikefa sy mikapoka avy ny andro izay hampionona. Na izany aza, ny olona rehetra dia manana fandeferana FPS hafa mba hametraka ny sary mifanaraka.
FRAPS Crack can also manage and takes screen shots so that it can be used as a screenshot manager. Hihazona ny naniry sary ny asa fanaovan-gazety ny iray manan-danja, dia hanana azy ireo voavonjy ao amin'ny mazava fampirimana ny anarana rehetra, ho azy.
Afaka misafidy ny hisambotra hetsika iray isaky ny mandeha, na matetika amin'ny fotoana nomena hantsana. Mihazakazaka FRAPS eo aoriana eo am-nilalao ny lalao ary makà sary in BMP endrika.
FRAPS dia afaka mandray lalao lahatsary avy eo dia mivadika ho zavatra izany fa afaka mizara amin'ny hafa, na hamorona montages.
Koa satria dia mahasoa ny fampitahana izany; no nanorina azy ho any amin'ny hampitsahatra ny Benchmark taorian'ny fe-potoana raikitra mba hahafahanao manao toy izany koa isaky ny ampahany Benchmark, ary afa-tsy ny vokatra mifanaraka amin'ny endrika ho nomena fampirimana.
Azonao atao ihany koa ny feo an-tsoratra Plus afaka manana ivelany fahan'ny izay ny micro-tsoratra tamin'izany andro izany toy ny feony mba afaka mandre feo amin'ny chat ihany koa.
Download ny .exe rakitra nomena eto ambany ka hametraka izany
Fotsiny hanomboka ny fampiharana, ary manomboka manao pikantsary sy lahatsary